MAXAY TAHAY LIINTA: FAA'IIDOOYINKA FAA'IIDADA LEH IYO KA HORTAGGA - DAAWADA DADWEYNAHA
Qodobbada waxtarka leh iyo khatarta ah ee liinta
Lemon - dhirta Citrus jilicsan. Waxay u muuqataa in ay sabab u tahay isku dhafka isbaareysiga, iyo muddo dheer waxay u kobcisay noocyo kala duwan, ka dibna kaliya waxa ay ahayd mid degan oo loo beddelay dhaqan beerta caanka ah (Koonfurta ama Koonfur Aasiya). Maanta warshadani waa mid aan la ogeyn xaalad duurjoog ah. Waxaa si ballaaran loo beeray dalal badan oo adduunka ah. Dabcan, Sababta tani ma aha dhadhankiisa dhadhanka, laakiin isticmaalka liin ee jidhka bini'aadamka, kaas oo daboolaya dhammaan faa'iidooyinka. Waxaan u goynay qodobkan si aad u aragto waxyaabahan faa'iidooyinka leh iyo qaar ka mid ah dhibaatooyinka.
Ma taqaanaa? Tixgelinta ugu horeysa ee liinta waxay dib u eegaysaa qarnigii XII (Hindiya, Pakistan). Kadibna wuxuu yimid xeebta Bariga Dhexe, Waqooyiga Afrika, Spain iyo Talyaaniga. Maanta, hoggaamiyeyaasha beeritaanka miraha kuwan waa Hindiya iyo Mexico, mid kastoo ka mid ah waddankan waxa uu ka dhigan yahay 16% dalagga adduunka (qiyaastii 14 milyan tan oo sanadle ah).
Waxyaabaha kiimikada ee liinta
Faa'iido, sida waxyeelada lumaha (mararka qaarkood waxay dhacdaa), waxaa lagu sharraxay habka kiimikada. Foormaatka liin wuxuu ku badan yahay fitamiinada (PP, E, C, B1, B2, B5, B6, B9, A, flavonoids, beta carotene), asiidhyada (malic, citric), sonkorta, walxaha pectic, phytoncides, galacturonic acid. Waxa uu leeyahay micro (macdan, copper, fluorine, zinc, manganese, molybdenum) iyo macronutrients (kalsiyum, sodium, fosfooraska, sulfur, magnesium, potassium, chlorine).
Abuurka waxaa ku jira limonin iyo saliida dufanka (sidoo kale waxay ku jirtaa caleemaha iyo laamaha). Qaybaha ugu muhiimsan ee saliiddu waa terpene, α-limonene, citral, geranl acetate. Tan macneheedu ma aha oo kaliya faa'iidooyinka liin, laakiin sidoo kale urta dabeecadda. Caleemaha sidoo kale waa hodan ku ah vitamin C, iyo jilifku waa githcoside citronin.
Mid ka mid ah miro khaas ah oo qiimo leh, sababtoo ah waxa uu ka kooban yahay wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo faa'iido leh.
Ma taqaanaa? Dhirta liinta ayaa midho dhali doonta sanadka oo dhan waxana uu awood u leeyahay soo saarida miraha 225-270 kg / sanno. Waqtigii hore, sababtoo ah xad-dhaafka xad dhaafka ah, liinta ayaa loo soo bandhigay hadiyado boqorrada, iyo ragii Renaissance waxay isticmaaleen casiir sida macnaheedu yahay dibnaha dibnaha.
Waxtarka Miraha Lemon
Lemon waa miro hantidu faa'iido leedahay sidoo kale waxaa ka mid ah saameyn antiseptic ah. Tusaale ahaan, qaar ka mid ah wadamada Afrika, marka dabaysha la gooyo, nus nus liin ayaa lagu dabaqi karaa meel adag, qeybta labaadna si fudud ayaa loo nuugaa. Dufan dufan ah, meel u dhow qof shaqaale ah, wuxuu kordhiyaa awoodiisa shaqo dhowr jeer. Thanks to walxaha pectin ku jira miro, liin wuxuu awoodaa inuu ka saaro biraha culus jirka. Intaa waxaa dheer, liin, sida xubnaha kale ee cirfiidka, waa daaweyn wanaagsan oo loogu talagalay geedi socodka goosefactive, gaar ahaan beerka (faa iidnimadu waa in la saaro laguna baabi'iyo sunta aan waxyeeleynin nidaamyada kale ee jirka). Sidoo kale in ay ka kooban tahay miro this badan badan oo fiber, taas oo kor u qaadaysa dheefshiidka, iyo maqaarka cusub ayaa yareynaya sameynta gaasaska xiidmaha.
Gargaarka Biyaha Lemon
Caanaha liinta ayaa kor u qaadaya dheelitirnaanta maskaxda, hagaajinta waxqabadka maskaxeed, iyo xitaa quwadda dabiiciga ah, sidoo kale waxay taageertaa hawsha habboon ee nidaamka wadnaha iyo kelyaha, iyo citrine oo leh vitamin C wuxuu leeyahay saameyn togan ku leh dheef-shiid kiimikaad, hababka casriga oo kordhiya cufnaanta iyo xoogga gidaarrada dhiigga. caadiyan dhiig-kar. Tan iyo maadada liin waxay kor u qaadeysaa firfircoonida uric acid ee jidhka, waa inay noqotaa qayb ka mid ah cuntada joogtada ah ee dadka qaba cudurada wadajir ah, haddii kale ma jiri doonto faa'iido badan oo laga yaabo inay naadir ama hal isticmaalo, inkastoo ayan keeni doonin waxyeello.
Sidee biyaha ufilan lemon
Waxaa la rumeysan yahay in cabitaanka biyaha maalinlaha ah ee liinta (calool madhan, 20 daqiiqo ka hor quraacda), waxaad xoojin kartaa habka difaaca jidhka, hagaajinta hawlaha wadnaha iyo muuqaalka maqaarka, caadiyan hababka dheef-shiidka. Biyaha leh liin ayaa lagula talinayaa in lagu xoqo dhuun xanuun, iyo godka afka - oo leh infakshanka xuubka xabka. Waa faa'iido inaad timahaaga ku biyo raaciso biyo haddii ay jirto xaalad baruur badan oo ah dufanka maqaarka, maaddaama ay hagaajinayso qanjidhada qanjirada, xayawaanka timaadda iyo dhalaalaya.
Maxay tahay liin liin u ah ragga iyo dumarka?
Ragga iyo haweenkuba waxay ka faa'iideysan karaan sifooyinka faa'iido leh ee miro-gaaban.
Qalabka faa'iido leh ee liinta ragga
Ka jawaab su'aasha: "Maxay tahay liin liin ragga?", Waxaan bilaabeynaa, marka hore, iyada oo awood u leh inay taageerto awooda labka ah. Waqtiyadii hore, liin ayaa loo isticmaalaa si loogu diyaariyo daroogo loogu talagalay dhalmo la'aanta ragga, maadaama uu ahaa kii xoojiya dhaqdhaqaaqa spermatozoa iyo hagaajinta tayada shahwada. Sidoo kale mararka qaarkood waxaa loo isticmaalaa daaweynta prostate-ka. Gels iyo looska oo lagu xiirayo, ka kooban oo ay ku jirto liin, si fiican u cusbooneysii maqaarka oo ka ilaali cuncun.
Waa muhiim! Lemon wuxuu keeni karaa faa'iidooyin badan, laakiin isku day inaad si sax ah u isticmaashid oo aanad ku dhaafin. Isticmaalka badan ee miro ayaa waxyeeleyn kara jirkaaga, sababtoo ah aashitada kor u kaca waxay si xun u saameyn doontaa tayada shahwada.
Maxaa faa'iido leh u ah liinta haweenka
Isaga oo ka hadlaya sida liin liin loogu talagalay jirka dumarka, waa inaad xasuusnaataa dhammaan noocyada kala duwan ee walxaha firfircoon ee ku jira sheygan, sababtoo ah waxay isku daraysaa wax kasta oo aad u baahan tahay si loo hubiyo quruxda iyo caafimaadka timahaaga iyo maqaarkaaga. Sida dabiiciga ah ee antioksidan, liin wuxuu awood u leeyahay inuu nadiifiyo maqaarka, ka saaro finan, madow, garaac maqaarka. Haweenka ragga ah waa inay ogaadaan in si joogta ah ay u isticmaalaan liin marka la dhaqayo timahooda ay kor u qaadi karaan midabka timaha, waxay siiyaan iftiin dabiici ah.
Ma taqaanaa? Wax kasta oo ku saabsan liin, ku saabsan waxyeellada jidhka (waxyeelada iyo faa'iidooyinka), waxaa loo yaqaannaa bogsiiyayaashii hore. Waxay isticmaalaan liin si ay u daweeyaan cudurrada dheddiga ee kala duwan. Tusaale ahaan, Avicenna, waxay u aragtay daaweyn wanaagsan oo loogu talagalay sunta keenta xilliga uurka.
Lemon waxaa si weyn loogu isticmaalaa daawada dhaqameed (sida daaweyn iyo daaweyn kaabis ah hypovitaminosis, avitaminosis, rheumatism, sida dawo loogu talagalay, sida antidoot ee sumowga alkali, si loo hagaajiyo urta iyo dhadhanka daawooyinka), inkastoo aysan dhaafin daawada iyo qurxinta , cadar, nafaqo, iyo karinta.
Lemon waxaa si weyn loo isticmaalaa daawada dhaqanka sida daaweynta vitamin, dheeraad ah - cagaarshow, barar, gout. Lemon leh malab iyo subag ayaa daweeya cudurrada faafa, iyo shaaha leh liin waxay ku taliyeen in ay cabaan hargab, qandho, haraad iyo cudurro neefsashada. Gawaarida qoorta ee cunaha waa in lagu miiray casiir khudrad ah, iyo sida daaweynta suntan, waa inaad isticmaashaa isku dar ah liin, khal iyo alum. Si aad uga takhalusto hadhuudhka, daawada dhaqameed waxay ku talineysaa 2-3 maalmood ka hor wakhtiga jiifka, uumi ka baxa lugta iyo ku dhaji dareenka liinta leh liinta leh qashinka. Sharoobada Lemon waxaa loo isticmaalaa sida anthelmintic.
Sidii horey loo soo sheegay, liin ayaa loo isticmaali karaa timaha iyo wejiga, laakiin sidoo kale waxay faa'iido u keeni doontaa ilkaha iyo ciddiyaha, inkastoo ay isticmaalaan si aan habboonayn ama xad dhaaf ah, waxyeello waa inaan sidoo kale laga saarin. Decoction ee liin ah waxaa loo isticmaalaa in laga takhaluso xamaasad by timo timahooda toddobaadkii hal mar. Casiirka liinta waxaa loo isticmaalaa in laga soo saaro dhibco iyo lafdhabarta, iyo sidoo kale xoojisaa maqaarka iyo yareynta finanka.
Tirada barafka wanaagsan ayaa la yareeyn karaa, muuqaalka cusubna waa la hortagi karaa iyada oo la isticmaalayo isku dar ah qaybo siman oo liin iyo liin saliid (subaxda iyo ka hor wakhtiga jiifka). Dhibaatada maqaarka qafiifka ah ee suxulka, jilbaha iyo cirbadaha ayaa lagu xallin karaa iyadoo la xoqdo lakabka liinta dhawr daqiiqadood. Si aad uga takhalustid huurada, 2 jeer toddobaadkii (maya mar dambe) caday ilkahaaga waxaad ku cabi kartaa liinta cagaaran iyo liinta. Si kastaba ha noqotee, isticmaalka xad-dhaafka ah ee liinta ee manuucyadaasi waxay keeni kartaa cawaaqib aan loo baahnayn, sida dhaawaca cayayaanka ilkaha.
Si aad u xoojiso ciddiyaha, ka dhigi iyaga dhalaalaya - iyaga iyaga oo leh diirka liin. Mararka qaarkood waxaad xitaa beddeli kartaa deodorant leh liin, adoo isticmaalaya maqaarka ka dib marka aad dhaqaysid. Si kastaba ha ahaatee, dhexdhexaadintu waa in sidoo kale lagu eegaa halkan si aan loo helin caro. Casiirka liinta waxaa badanaa laga helaa walxaha shaambada, looska, kareemada.
Nafaqo badan oo nafaqo leh ayaa rumaysan in liin ay macnaheedu tahay in si caadi ah loo miisaan karo miisaanka. Waxay gaajooneysaa gaajada, hagaajinaysaa dheefshiidka, waxay gacan ka geysataa nuugista saxda ah ee cuntada iyo nuujinta degdegga ah ee kalsiyum, taas oo lagama maarmaan u ah gubida dufanka. Sidaa darteed, khubarada waxay kugula talinayaan liinta ama kalluunka biyaha casiirka liinta iyo roodhida saladhyada iyo maraqyada leh xaji. Saliidda lagama maarmaanka ah waxaa loo isticmaalaa miisiinka, aromatherapy, waxaana sidoo kale lagu daraa boodada. Dib u eegid wanaagsan ayaa sidoo kale la siiyay cunto liin liin ah, taas oo aan lagu soo celin karin wax ka hor fasax bil ah.
Laydoonku waa la cuni karaa mid cusub, laakiin waxaa badanaa loo isticmaalaa macmacaanka, khamriga cabbitaanka khamriga ama soo saaridda cabitaannada fudud. Casiirka liinta waa qaybta ugu weyn ee liinta, laakiin badanaaba waxaa lagu beddelaa dhirirta saliidda ee warshadda. Dabcan, kiiskan, ma ahan wax walba oo lagama maarmaan ah si looga hadlo sida ay faa'iido u tahay, maaddaama ay u badan tahay in la sharaxo sida nooca "liin" cabitaanku uu waxyeelo u yahay.
Sida lafdhabarta, liin waxaa lagu daraa soodhiyo kala duwan, suxuunta macaan, suulasha, suugada, kalluunka, digaaga, cuntooyinka bariiska. Casiirka liinta waxaa loo isticmaalaa in lagu hagaajiyo dhadhanka suxuunta badan, sida saladhka, saxamada qabow, kalluunka la shiilay; marka aad cunto karisid, suugo, sharoobada, kiriimka, cabitaanka. Saliida liin waxay u adeegtaa sida quruxda quruxda badan ee suxuunta.
Contraindications si ay u cunaan liin
Hadda waxaan fahmi doonnaa sida liin ay u dhaawacmi karto jidhka bini'aadamka iyo cidda miraha ah ee ka hortageysa.
Liibaanku ma siinayo carruurta ilaa saddex sano iyo kuwa xasaasiyad ku leh citrus.
Laguma talinayo dadka qaba boogaha caloosha, nephritis ba'an, cagaarshow, gastroenterocolitis.
Xaalad kasta, miro badan waa in la cunaa qadaro ku filan, haddii kale waxaad halis u geli kartaa xasaasiyad, badanaaba qaabka finanka.
Khudradda liinta ee maqaarka waxay kordhisaa suurtogalnimada sunburn, gaar ahaan dadka qaba nuuca maqaarka iftiinka.
Xilliga uurka iyo nuujinta looma isticmaali karo liin ahaan daroogo badan.
Waxaa lagula talinayaa in aad cabto liin macaan ilaa caws, ka dibna ka dib - afkaaga ku biyo raaci biyo, sababtoo ah foomka aan la marin, wuxuu dhaawac u keeni karaa ilkaha ilkaha.
Miro waa in la maydiyaa, maadaama ay jiri karto jirro ku jirta.
Waa muhiim! Lafaha liin waa sun.
Lemon wuxuu leeyahay awood u bogsiin, laakiin waa inaadan tixgelineynin argagaxa cudurada oo dhan. Lemon wuxuu noqon karaa mid faa'iido leh oo waxyeello u leh caafimaadka ragga iyo dumarka. Sidaa daraadeed, si taxadar leh u isticmaal, adoo tixgelinaya dhammaan sifooyinka xun ee suurtogalka ah, kadibna midhihii ayaa kuu keeni doona faa'iido kaliya.